Xuska Maalinta Duumada Aduunka oo laga xusay Magaalada Bosaso – SBC
Xuska Maalinta Duumada Aduunka oo laga xusay Magaalada Bosaso
Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu maamuusaayey Maalinta Malaariyada Aduunka ayaa waxa ay ka dhacday Magaalada Boosaaso.
Waxaana ka soo qayb galay Duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdala Xasan ,Wasiirka wasaarada Caafimaadka Puntland Saynab Ugaas yaasiin ,Isuduwaha wasaarada caafimaadka Puntland Siciid Maxamed Waraabe ,Madaxa Takhaatiirta Gobolka Bari Dr Rooble iyo ardayda jaamacadaha Qaybta Caafimaadka .
Ugu horeyn waxaa sharaxaad ka bixiyey Barnamijka ay Puntland kula daagaalamayso Malaariyada Madaxa Malaariya Wasaarada caafimaadka Puntland Dr C/kariin Xuseen Xasan isagoo sheegay in cudurkaan uu ka dilaacay magaalada boosaaso wasaaradu ay xooga saartay sidii ay wax u ga qaban lahaayeen Arintaan iyagoo haatana ku guulaystay in ay ka dhimaan halkii ay joogtay markii hore.
Duqa Degmada Boosaaso Xasan Cabdala Xasan oo isaguna madasha ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa ka dhawaajiyey in cudurkaan uu ka dilaacay Magaalada Boosaaso loona baahanyahay in si wada jira wax looga qabto.
Madaxa Taakhaatiirta Gobolka Bari Dr Rooble ayaa dhankiisa ugu baaqay taakhaatiirta in ay iska kaashadaan sidii si wada jir ah loo la dagaalami lahaa cudurkaan oo Dad ku dilay guud ahaa Gobolka Bari.
Isu duwaha wasaarda Caafimaadka ee Gobolka Bari Siciid Maxamed Waraabe ayaa dhankiisa ugu mahadceliyey Takhaatirtii kaalinta ka qaatay sidii loo ciribtiri lahaa cudurkaan uguna baaqay in ay halkaas kasii wadaa shaqada si loo ciribtiro cudurkaan.
Wasiir ku xigeenka wasarada Caafimaadka Puntland Saynab ugaas yaasiin oo ugu danbayn madasha soo afmeertay ayaa dhankeeda ugu baaqaday bulshada ku dhaqan Magaalada Boosaaso iyo Takhaatiirta ba in ay iska kaashadaan sidii loo ciribtiri lahaa cudurkaan .
Maanta oo kale waa Maalin si weyn looga xuso guud ahaa Caalamka oo idil iyadoona wacyi gelin laga sameeyo sidii looga hor tegilahaa Cudurkaan Dilaaga ah.